Ogaden News Agency (ONA) – Wasiirka Horumarinta Norway oo Ururka Cadaalada Ogaadenya Ku Martii Qaaday Xafiiskiisa
Wasiirka Horumarinta Norway oo Ururka Cadaalada Ogaadenya Ku Martii Qaaday Xafiiskiisa
Posted by ONA Admin	/ May 29, 2012
Wasiirka horumarinta Norway Heikki Holmås ayaa Ku marti qaaday ururo uu kamid yahay ururka Cadaalada Ogaadenya xafiiskiisa si uu uga waramo waxyaabihii uu kala soo kulmay safarkiisii Itoobiya una dhagaysto fikradaha ay qabaan qurbajoogta ururada kala duwan.
Ururada uu wasiirku martiqaaday ee kasoo qaybgalay waxaa kamid ahaa;
1.URURKA CADAALADA OGAADENYA.
4.ETHIOPIAN DEMOCRATIC CHANGE.
Wasiirku wuxuu ugu horeyn u mahadceliyay ururada shirka kasoo qaybgalay, wuxuuna ururada u sheegay in mustaqbalka ay xiriiro joogta ah yeelan doono isaga oo isla markaa urur walba ka codsaday in wixii talo iyo tusaale ahba u soo gudbiyaan.
Wasiirku wuxuu sheegay inay Norway gacan ka gaysato sidii loo caawin lahaa in Itoobiya baahiyaha kajira laga kaalmeeyo si loo badbaadiyo kumanaanka gaajada iyo macaluusha u dhinta, waxaa kale oo intaas sii raaciyay in ay isku soo afgarteen in iskaashiga horumarinta sare loo qaado sida:
Mr. Heikki holmås waxaa kaloo uu u sheegay sababta ururada uu u martiqaaday inay tahay si uu u dhagaysto fikirka ay qabaan iyo wixii talo ah, sidaas darteedna urur urur fikir uga dhiibataan iyo wixii talo ah.
Ururadii la martiqaaday ayaa bilaabay in urur walba fikirkooda ay dhiibtaan iyaga oo isku cod ku sheegay in Itoobiya aanu wax horumar ah ka hirgali karin inta laga helayo cadaalad iyo xoriyad. Waxaa wasiirka loo sheegay in dhaqaalihii lagu taageero itoobiya in uuna gaadhaynin dadka ee uu ku dhamaan jeeb dad gaar ah, hadii deeq waxbarasho Norway itoobiya siisana ay helayaan oo kaliya dadka taageera xisbiga (eprdf) oo kaliya.
Ururka cadaalada Ogaadenya markii la soo gaadhay ayaa wuxuu sheegay inuu aad ula yaaban yahay in la dhaho Itoobiya ayaa horumar kajiraa , marka aan wada ognahay in talliska Adis ababa xasuuqayo shacabka Ogaadenya, isla mar ahaantaana in Ogaadenya oo dhan marka laga reebo Jigjiga & dhanaan uuna joogin hal dhakhtar.
Ururuka Cadaalada ogaadenya oo ay matalayeen mudane axmed ibraahim & khaliif cabdi cali waxay wasiirka u sheegeen in ogaadenya ka socoto oo kaliya xasuuq iyo gumaad aan loo meel dayin, beesha caalamkuna wali waxba ka qaban, waxaa dumarka ogaadenya lagu hayaa kufsi ,dil & xadhig iyada oo qaar ku dhintaan, halka kuwa kalena u dhintaan dawo iyo daryeel xumo iyo silac.
Ururka cadaalada ogaadenya wuxuu ugu baaqay dowlada Norway in ayna wax kaalmo ah siin xukuumada Itoobiya inta laga helayo cadaalad iyo xoriyad, hadii ay ka fursan waydana la hubiyo in aan kaalmada loo adeegsan waxyeelada rayidka Ogaadenya iyo Itoobiyaba.
Wasiirka wuxuu balan qaaday in talooyinka iyo fikirka ururada shirka uruurin doono rajeynayana in wixii khaldan la soxo. Isaga oo sheegay in hada kadib xiriirka ururada iyo wasaaradiisu uu joogto noqon doono.
Shirkii maanta ee wasaarada horumarinta Norway iyo ururka cadaalada Ogaadenya wuxuu ahaa guul u soo hoyatay shacabka dulman ee Soomaalida Ogaadenya.